နတ်ကတော် ခေါင်း သေတာ မကျွတ်လို့ ကန္နားပေးရတယ်တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » နတ်ကတော် ခေါင်း သေတာ မကျွတ်လို့ ကန္နားပေးရတယ်တဲ့
နတ်ကတော် ခေါင်း သေတာ မကျွတ်လို့ ကန္နားပေးရတယ်တဲ့
Posted by ဆူး on Jan 9, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 24 comments
ဆူး စိတ်ကူး နတ်ကတော် ခေါင်း သေတာ မကျွှတ်လို့ ကန္တားပေးရတယ်တဲ့
ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ဆိုင်းသံ ဗုံသံတွေ တခြိမ်းခြိမ်း ကြားနေရတယ်။
စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် နတ်ကန္နားပေးမယ်တဲ့။
ဘယ်လိုများလဲ ထပ်မေးကြည့်တော့.. သေသွားတာ နှစ်လလောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။
နတ်ကတော် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် သေပြီး နောက်ပိုင်း ခဏခဏ တူမလေးကို ၀င်ပူးပြီး စကားဝင်ပြောလွန်းလို့ နတ်ကတော် အပေါင်းအပါများက အကုန်အကျခံပြီး ကန္နားပေးကြတာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ နတ်ကတော် အပေါင်းအပါများ ခံပေးတယ်လို့ သိရတယ်။ ကုန်ကျ စရိတ်က ၁၀သိန်း ကျော်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ၀င်ပူးပြောတုန်းက ရီလည်း ရီရတယ် သနားဖို့လည်း ကောင်းတယ်။ ဘေးအိမ်တွေက ခြောက်လွန်းလို့ မအိပ်ရဲဘူးလို့တောင် ကြားမိတယ်။ ၀င်ပူးပြောတုန်းက သူ့အမ လုပ်သူကို ငါ ၂လုံးပေါက်တာ ၁၀၀ ဖိုး မဟုတ်ဘူး ၂၀၀ ဖိုး အဲဒါ သွားထုတ်လိုက် အုန်း ဆိုတာလည်း ပါသေးတယ်။ ၀င်ပူးပြောပြီး ရစရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေ လိုက်တောင်းနေလွန်းလို့.. လမ်းထိပ်မှာ ခေါက်ဆွဲ ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်ဆိုလည်း ဟဲ့.. မိစိန် နင်ယူထားတဲ့ ငါ့ အကြွေး ၃သိန်းနော် မိစိန်က ဘာ ၃သိန်းလဲ မဟုတ်ဘူး ၁သိန်းထဲ.. ဟဲ့ ကောင်မ ငါ သေသွားပြီ ဆိုပြီး နင် မငြင်းနဲ့ နင် ယူထားတာ ၁သိန်း ၃ခါ ယူသွားတာ နေ့ရက် အတိအကျ ပြောတော့ မိစိန် တယောက် ၀န်ခံသွားလေရဲ့..
ပြောလို့သာ ပြောတာ.. နတ်ကန္နားနဲ့ တရားပွဲနဲ့ လမ်း တလမ်းတည်း ဖြစ်နေတယ်။
(စုံစမ်းကြည့်တော့ ယနေ့နဲ့ နက်ဖြန် နတ်ကန္တားပေးမယ်တဲ့)
စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီနေ့နဲ့ နက်ဖြန် နတ်ကန္နားပေးမယ်တဲ့။
(ဘယ်လိုများလဲ ထပ်မေးကြည့်တော့.. သေသူက ၂လလောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။)
ဘယ်လိုများလဲလို့ ထပ်မေးကြည့်တော့ သေသွားတာ နှစ်လလောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။
(နတ်ကတော် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်တဲ့ ခဏခဏ တူမလေးကို ၀င်ပူးပြီး စကားဝင်ပြောလွန်းလို့ )
သေသွားတာက နတ်ကတော်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့တူမလေးကို ခဏခဏ ၀င်ပူးပြီး စကားဝင်ပြောလွန်းလို့ )
မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးက အဲဒီလမ်းမှာ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်တဲ့ တရားပွဲနဲ့ နတ်ကန္နား ဘယ်မှာလူပိုပြီး စည်နေသလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
အဲဒီအဖြေက အဲဒီရပ်ကွက်က လူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပြမှာဘဲ။
ဖြေလိုက်ပါ ဖြေလိုက်ပါ ဖြေလိုက်ပါ
အန်တီဆူးဆိုလိုချင်တဲ့ စာလုံးအဓိပ္ပါယ်ကို ဦးပေါက်နားမလည်လို့။ သူပြောချင်တာ….
နတ်ကသူ့ဆီလာတာ မကြိုက်ရင် ပွဲထဲအဝင်မခံဘူး၊ ကန်ပြီးတားလေ့ရှိလို့ နတ်ကန္တားလို့သုံးသည်။
သေသူက ရေဖျဉ်းရောဂါ စွဲကပ်ပြီးသေတယ်လို့ အတိအကျ မပြောချင်လို့ဖြစ်သည်။
ခဏခဏတူမလေးဆိုတာ တရားသဘောကို ပြောချင်တာပါ။ ခဏဖြစ်ခဏပျက် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း သဘောကို ဆိုလိုသည်။
လေးပေါက်ကြီး ပြောတဲ့ စာသား ကို မှတ်သားထားပြီး နောက်တခါ ဆင်ခြင်ပါ့မယ်။
ဒီပုံအတိုင်းဆို နတ်ကန္နား အခါ ၁၀၀ ပေးတောင် ကျွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ..
ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး အလှူအတန်းပေး အမျှဝေးမှ ရလိမ့်မယ် ..
၀င်ပူးလိုက်.. အမ လုပ်တဲ့သူက မောင်လေးရယ် မောင်လေးရယ် ဆိုပြီး အော် ငိုလိုက်.. ၇ရက်ပြည့်ပြီ.. မလာနဲ့တော့.. နှင်လွတ်တာဘဲ.. မရဘူး.. လာတာဘဲ.. ၀င်ပူးမြဲ ပူးပြီး စကားတွေ ပြောနေလို့.. ညည ဆို အသံ တွေ ကြားနေရလို့.. ဘေးအိမ်တွေက ကြောက်ကြတယ်။ အဲဒီ လူကြီး မသေခင်က ကလေးတွေ ဆို သူကို ကြောက်ကြတယ် လူက တကိုယ်လုံး ဖောပြီး မျက်နှာမှာ အဖုတွေနဲ့ ညနေပိုင်း မှောင်တဲ့ အချိန်ဆို ကြောက်လို့ မကြည့်ရဲဘူး ပြောတာဘဲ။
ဒီ လို ဆို အ ကြွေး တွေ တောင်း ပြီး မ ကျွတ် မယ် ထင် တယ် ။
အမျှဝေလို့ သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ဘုံက သူရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ နတ်စိမ်းဘုံမပါဘူးနဲ့တူပါတယ်
နဂိုထဲ ကအယူ တိမ်း လို့နတ်ကတော် ဖြစ် တာ။ ခုသေ တော့ ထပ် ကနား ပေး အုံး မယ်ဆိုတော့ ပိုဆိုး တော့မပေါ့။ သရဲ မွေး တယ် ခေါ်မလား အဲလို ဖြစ် နေ ပြီ။
တရား ပွဲ ကတရား နာပြီး ကျွတ်လွတ် သွားပါစေဗျာ။
etone ကြားတာလေး နည်းနည်း မျှအုန်း..
ဆူးရေ…. အဲ့ဒါကြီး ဆူညံနေလွန်းလို့ အီးတုံးရုံးပိတ်ရက်က အပြင်ပဲထွက်နေတာ ။
အလကားပါ အစ်မရေ …. ကျွတ်တာမကျွတ်တာ တော့ မသိဘူး ။ ခြောက်တယ်ဆိုတာလည်း စကားကနေ
ကားသွားတာ ပြီးတော့ … သူတို့ အခြောက်မတွေက နည်းနည်းရွပြီး
ပွဲလုပ်ချင်လို့လုပ်တာ … ဘာမှ ၀င်ပူးတာတို့ဘာတို့ကလည်း အခိုင်မာမဟုတ်ဘူး ။
အီးတုံးက သူတို့အခြောက်နံ့ နံလို့ သွားကိုမကြည့်ဘူး ။ သူ့ရဲ့
ညီမဖြစ်သူဆိုတာကလည်း … စကားကို လက်တလုံးကြားပြောတတ်တဲ့လူမျိုးပါ … ကြည့်ရတာ
နတ်ကတော်တွေ ပျင်းလုိ့ဆုချတာလေးဘာလေးများရမလားဆိုပြီး ကနားပေးတာ ထင်တယ် …။
အီးတုံးကတော့ အဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းသိပြီးသားဆိုတော့ ယုံကိုမယုံဘူး ။ ငယ်ငယ်က
သူတို့အိမ်ပေါ်ရောက်ဖူးတယ် … သူ့တူမလေးကို စာနည်းနည်းသင်ပေးတာ … အိမ်မှာက
နတ်ရုပ် အစုံပဲ နတ်ကတော် အ၀တ်တွေလည်း အများကြီးပဲ … နောက်တော့ ကောင်မလေးက
စာသိပ်စိတ်မ၀င်စားတာနဲ့ …ဆက်မသင်ဖြစ်တော့ဘူး ။ …
ဒီနတ်ကတော်ကြီးသေသွားတာကလည်း …လေဖြတ်နေတာကို အိမ်သားတွေ မသိအောင်
ငါးသလောက်ပေါင်းခိုးစားတယ်လေ …ဒါနဲ့ သွေးတိုးတက်ပြီး ဂန့်တာ .. သေတာ
၄၉ရက်ရှိပြီတဲ့ မနေ့က အထိပေါ့ ။ နတ်ပွဲကုန်ငွေက
၁၀သိန်းတော့မရှိလောက်ပါဘူးအစ်မရေ ချဲ့ကားပြောတာပါ .. ။ ဒီမနက်ထိ
နတ်ပွဲမသိမ်းပုံထောက်ရင် ဒီနေ့လည်း ဆက်ကမယ်ထင်တာပဲ … ။ အောင်ပုရေးတဲ့
ပိုစ့်ကလို ကြက်ဖိုနဲ့ ကြက်မဆက်မဲ့လူများရှိမလားလို့တောင် နားစွင့်မိသေးတယ် :D
၁၀သိန်း လောက် ကုန်တယ် ဆိုတာ ဆေးဆိုင်က ပြောတာ။ စပ်စုချင်လို့ အီးတုံးကို တဖက်လှည့်နဲ့ မေးတာ.. ဟီးဟီး
အင်း….ရွာသားအသစ်လေး လျှာဝင်ရှည်လိုက်အုံးမယ်…အားအားယားယား နေရာတကာ ၀င်ပါတယ်လို့လည်းမထင်စေချင်ပါ၊ ၀ါသနာအရ လက်ယား၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်ဥုးသုမင်္ဂလဟောကြားခဲ့သော တရားတော်ထဲတွင် နတ်ကတော်သေလျှင် မည်သည့်နတ်ဘုံကိုမှ မရောက်ပါ၊အပါယ်လေးဘုံသို့သာရောက်ပါသည်။ ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊ပြိတ္တာ၊အသူရကာယ်။
ရဟန်းသံဃာများမှ ကောင်းမူအစုစုတို့ကို အမျှပေးဝေပါသောလည်း ထိုသူသည်(သေဆုံးသူနတ်ကတော်) သရဏဂုံ တည်နေမှ သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ကျွတ်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတူမလေးသာ … ချော့မော့မေးလိုက်..
လွယ်လွယ်မဖြေလည်း…. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် .. ကိုကြီးကျော်ဝင်ပူးပြီး .. (သေတဲ့နတ်ကတော်ကို ). မေးနေတာပါဆိုပြီး … အမူးသမားမူးကြိမ်း.. ဓါးကြိမ်းကြိမ်းပြလိုက်..။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်နဲ့..ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်.. ကိုယ့်ဆားဗစ်စ်ကိုယ်.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့နည်းတွေပြောပြလိမ့်မယ်..။
ကဲ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများခင်ဗျာ အခါအခွင့်သင့်တုန်းဂဏန်လေးတွေ မေးပြီး အားပေးလိုက်ကြပေတော့ ….ဒန်ဒန့်ဒန် ဒန်ဒန့်ဒန်
အော် ဒီလို လူမျိုးမှာ အကြွေး သွားယူမိရင် သွားပီ …….ဟိဟိ
သရဲ ခြောက်ခံ ထိမှာပေါ့
သူရဲက ငါရွှေတွေ ပြန်ပေး …ပြန်ပေး…….မပေးပေးပေး ပေးပေးပေး
အခု ဒီအချိန်ဆို သိမ်းပြီ ပြီးသွားပြီ။
ဟုတ်ပါ့ မနေ့ညက အိမ်ပြန်တော့ နတ်ပွဲ သိမ်းသွားပြီးပြီတဲ့ ညနေစောင်းအထိကတုန်းပဲတဲ့…။ နားညီးသက်သာသွားတာရယ် ၊ အခြောက်မတွေ ဖလန်းဖလန်းထ လမ်းသလားနေတာ မမြင်ရတော့ အတော်လေးနေလို့ကောင်းသွားတယ် ။ ပွဲစလုပ်တဲ့နေ့က ညဘက်ကြီး အခြောက်မတွေ သူများကို သွားစလို့ ရန်ပွဲဖြစ်သေးတယ် … ညဘက် ဆယ်နာရီခွဲလောက်ရှိမယ် … အီးတုံးလည်း ပြန်ရောက်တာနောက်ကျလို့ စပ်စပ်စုစု ၀င်ကြည့်ခဲ့သေးတယ် :D
ဆူးရေ… ဆေးဆိုင်က မိန်းမကိုမေးတာလား ။ သူ့အဖေကို မေးတာလား ။ သူတို့ကလည်း နည်းနည်း အာရွှီးတွေလေ။
အံမလေးလေး နှစ်ယောက်သားအပေးအယူမျှနေလိုက်ကြတာ ရေပက်လို့ မ၀င်ဘူး နတ်ကတော်အကြောင်း……..
ရေပက်မ၀င်တဲ့ ကြားမှာ အဘနီက ဟိုဘက်လှည့် နားထောင် လိုက် ဒီဘက် လှည့် နားထောင်လိုက် လုပ်နေတယ်နော်။ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြောင်း တဖက်လက်နဲ့ လှည့်ပြီး ပြောပြနေတယ်။ အဘနီ ရန်ကုန် ရောက်ရင် အကြောင်းကြား အီးတုံးနဲ့ ဆူး နဲ့ ပေါင်းပြီး နတ်ကတော်တွေ မြင်ဘူးတယ် ရှိအောင် မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်.. စိတ်လျော့…